Muraalee Afaanii Jiran
Muraalee afaanii ijaaraman qabata.
Kuusaalee hiika fayyadaa
Yeroo kuusaan gulaalamu, mirkaneessi haala faayilichaa irratti raawwata. Yoo faayilichi hayyama barreessuu dhabe , jijjiiramuu hin danda'u. Qabduuleen Haaraa fi Balleessi achiin dandeessifamu.
GalfatniIgnoreAllList filatamuu fi balleeffamuu hin danda'u. Jechoota akka qabiyyeetti dabalaman qofatu balleeffamuu danda'a. Kun kan mul'atu ufmaan yeroo hunda LibreOffice cufamu dha.
Dirqaalaalee to'annoo qubee fi murfisaaf qindeessa.
Jechoota qubee gurguddaa fili
Qubeen guguddaa akka yeroo to'annoo qubee filataman mul'isa.
Jechoota lakkoofsota faana fili.
Jechoota kan lakkoofsota akkasumas qubeelee akka filatamuuf jedhan mul'isa.
Kutaalee addaa fili
Akka kutaaleen addaa kan akka barruu suuraa yeroo to'annoo qubee filataman mul'isa.
Yeroo barreessitu qubeessuu mirkaneessi
Lakkoofsa gadaantoo qubeelee murfisaa
Qubeelee cita sararaa dursan
Qubeelee cita sararaa booda dhufan
Gaggaafannaa malee murfeessi
Akka ati tasumaa ufmaan ala murfeessuu hin gaafatamne ifteessa. Badhichi yoo mallatteeffamuu baate, yeroo jechi beekamuu baate gongee dhaamsaa murfisota ittiin galchitutu siif dhiyaata.
Kutaalee addaa murfisi
Akka murfisi miiljalee, irraantoo fi jalaantoo keessatti raawwatu ifteessa.
Title is: Gargaarsa barreessuu